BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 1/28/20150အကြံပြုခြင်း
ယနေ. ဒဂုံ တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခရဲ. ကလေးဆန်သော လုပ်ရပ်
သင်္ချာ ပထမနှစ်ကျောင်းသားများ ကောင်းညွန့်ခန်းမ သို့ ဦးတည်လာနေကြသည် ။
အခြားသော အတန်းကြီးကျောင်းသား အနည်းငယ်နှင့် အခြားမေဂျာကျောင်းသား
အချို့လည်း ကောင်းညွန့်ခန်းမသို့ လာနေကြသည် ။ Frist Year Fresher Welcome
တိုင်းပြည်၏ နေရာအနှံ့အပြားတွင်ဖြစ်ပွားနေသော စတုတ္ထကျောင်းသားသပိတ်နှင့်
ပက်သက်၍ ဟောပြောမည်ဟူသော သတင်းမှာ ကျောင်းသားများအကြား ပျံ့နှံ့
ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာလှဌေး ရောက်သည့်အချိန်တွင် အခမ်းအနားစသည် ။ ဦးစွာ
ပါချုပ် အဖွင့်စကားပြောသည် ။ ပုံမှန်အားဖြင့် အခမ်းအနားများတွင် ပြီးဆုံးသည်
အထိနေလေ့ရှိသည့် ပါချုပ်သည် အဖွင့်စကားပြောပြီးသည်နှင့် ခန်းမမှ ထွက်ခွာ
သွားသည် ။ ယင်းနောက် သင်္ချာငှာနမှူး ၊ အားကစားမေဂျာ ပါမောက္ခ နှင့် ဆရာမ
တစ်ဦး အမှာစကားပြောသည် ။
ထို့နောက် အခမ်းအနားအစီအစဉ်မှာ ကျောင်းသားကိုယ်စားလှယ် မှ စကားပြော
ပေးရမည့် အစီအစဉ် ။ ကျောင်းသားများမဲပေးရွေးချယ်ထားသော ကျောင်းသား
ကိုယ်စားလှယ် စကာပြောရမည့်အလှည့်တွင် ကိုမင်းသုခ (သင်္ချာ ကျောင်းသား
ကိုယ်စားလှယ်) စင်ပေါ်တက်လာသည် ။ စတင်ပြောကြားရာ
"မင်္ဂလာပါ လို့ မနှုတ်ဆက်ခင် မေတ္တာရပ်ခံစရာရှိပါတယ် ။ ဒါက ကျနော် စကားပြော
နေစဉ် မိုက်ကရိုဖုန်း ကြိုးဖြုတ်လိုက်တာ တို့ ၊ မီးဖြတ်လိုက်တာ တို့ မလုပ်ဖို့ကျောင်း
အာဏာပိုင်များကို ကြိုတင် မေတ္တာရပ်ခံပါတယ် "
"ဒီနေ့ ဒီချိန် ကျနော်တို့ ကျောင်းသားထုတစ်ရပ်လုံးအတွက် အရေးအကြီးဆုံး
ရောက်နေပြီ ။ ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင် .___
ထိုစဉ် ကောင်းညွန့်ခန်းမ၏ အနောက်ဖက်အခန်းရှိ လျပ်စစ်မိန်းကို လုံခြုံရေးတစ်ဦး
မှ ဖြုတ်လိုက်သည် ။ပါမောက္ခမှ "ကဲကဲ မီးပျက်သွားပြီ ။ ကိုယ်စားလှယ်စကားပြောတဲ့
အစီအစဉ် ဖျက်လိုက်ပါပြီ " ဟု အခမ်းအနားမှူးကို အမိန့်ပေးလိုက်သည် ။
သတင်းဓါတ်ပုံ-Dagon University Students' Union.
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 1/27/20150အကြံပြုခြင်း
Ti Ti Yadanar
ဦးဦး နဲ့ အန်တီ Thi Win Kyaw မှ........
ငွေ ၅၀၀၀၀ ကျပ် သွားရောက်ကန်တော့ ခဲ့ပါတယ်။
စေတနာ သဒ္ဒါတရားထက်သန်ကြတဲ့ဦးဦး နဲ့ အန်တီကိုလည်း
တောင်သာသမိုင်းရဲ့ တစ်ရက်တာ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ (ဇန်နဝါရီ ၂၇၊ ၂ဝ၁၅)
အေပေး..အောင်သောင်း... တောင်သာပြည်သူတွေထိပ်လန့် မှာ စိုးလို့ လမ်းပိတ်တာတဲ့... ပြည်သူတွေကြိုတာမှဝက်ဝက်ကွဲ.. အမှန်ကဒီပဲယင်းဖို့ ပြင်ထားတာ.. အစိုးရကတားတာမဟုတ်ပဲသူသ ဘောနဲ့ တားပြီးလုပ်ချင်တာလုပ်တာ အစိုးရထက်အာဏာရှိတယ်လို့ ပြ လိုက်တာပဲ....
ဓာတ်ပုံ - နိုင်လင်း/ကမာရွတ်မီဒီယာ
32Bit ပါ 64 bit ကဖိုင်ဆိုဒ် 2GBလောက်ရှိပြီးတချို့
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 1/25/2015 1 အကြံပြုခြင်း
အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေpdfဖိုင် ကျောင်းသားသပိတ်‌‌ခေါင်း‌ဆောင်‌ မဖြိုးဖြိုး‌အောင်‌ တို.ဦး‌ဆောင်
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 1/25/20150အကြံပြုခြင်း
၅၉(စ)နှင့် ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရန် အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဥပဒေကြမ်းတွင် ပါရှိ
Byအိဖြူလွင် 7Days (25-1-2015)
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေမူကြမ်း တွင် ပုဒ်မ ၅၉(စ)နှင့် ပုဒ်မ ၄၃၆ တို့အား အတိုက်အခံအင်အားစု များ လိုလားသည့်အတိုင်း ပြင် ဆင်ပေးထားကြောင်း သတင်းရရှိ သည်။
၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၉(စ)ကို ၁၉၄၇ ခုနှစ် အခြေခံဥပဒေတွင်ပါရှိသော မိဘ နှစ်ပါးနှင့် ကိုယ်တိုင်က နိုင်ငံသား ဖြစ်လျှင် သမ္မတအဖြစ် ရွေးချယ် ခံနိုင်သည်ဆိုသည့် သတ်မှတ် ချက်အတိုင်းသာ ပြင်ဆင်ထား ကြောင်း သိရသည်။
ထို့အပြင် မဖြစ်မနေပြင်ဆင် ရမည်ဟု အများကတောင်းဆို ထား သည့် ပုဒ်မ ၄၃၆ ကိုလည်း ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟူသော သတ် မှတ်ချက်အစား သုံးပုံနှစ်ပုံဆန္ဒမဲ ဖြင့်ဆိုသည့် သတ်မှတ်ချက်ဖြင့် ပြင်ဆင်ထားသည်ဟု သိရသည်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေမူ ကြမ်းအား ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ် များလေ့လာဆန်းစစ်ရေးကော် မရှင်က ရေးဆွဲခြင်းဖြစ်ပြီး ဥပဒေမူကြမ်း တစ်ခုလုံး ရေးဆွဲပြီးစီးပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
‘‘ဒီအထဲမှာ အများစိတ်ဝင်စားတဲ့ နှစ်ချက်စလုံးကိုပြင်ထား တယ်။ တကယ်မဲခွဲတဲ့အခါမှာ ပြင်နိုင်တာ၊မပြင်နိုင်တာတစ် ကဏ္ဍ၊ ဒီအထဲမှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ သမ္မတအဖြစ် ဝင်ရောက်ရွေးချယ်နိုင်ခွင့်ရှိအောင် ဥက္ကဋ္ဌက ပြင်ပေးထားတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်’’ဟု ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက ပြောသည်။
သို့သော် လွှတ်တော်တွင် မဲခွဲဆုံးဖြတ်ပါက အနိုင်ရမည်၊ မရမည် မခန့်မှန်းနိုင်သေးကြောင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက ပြောသည်။
‘‘ဦးရွှေမန်းက ပြင်ပေးထား တယ်ဆိုပေမယ့် တကယ်တမ်းမဲခွဲ ရင် နိုင်၊ မနိုင်ကြိုတင်ခန့်မှန်းလို့ မရပါဘူး။ တပ်ကလည်း ကန့် ကွက်နိုင်တာပါပဲ။ ပြည်ခိုင်ဖြိုး တချို့လည်း ကန့်ကွက်နိုင်တာပဲ။ နောက်ဆုံး နာမည်ကောင်းဝင်ယူ တာမျိုးတောင်ဖြစ်နိုင်တယ်’’ ဟု အမည်မဖော်လိုသူ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးက ဆို သည်။
လွှတ်တော်တွင် ဆုံး ဖြတ်ပေးနိုင်သည့် အဓိကအင်အားစုပါတီဖြစ်သော ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက အဆိုပါပုဒ်မ ၅၉(စ)ကို အခြေအနေ၊ အချိန်အခါအရ စဉ်းစားဆောင်ရွက်သင့်သည့် ပုဒ်မအဖြစ်သာ တင်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။
မကြာမီ ရက်ပိုင်းတွင် အဆိုပါဥပဒေမူကြမ်းကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်နိုင်ရေး အကောင်အထည်ဖော်မှု ကော်မတီက လွှတ်တော်သို့တင်သွင်းတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Ref: >> http://7daydaily.com/story/30245#.VMSpFv7kcjx
ဆေးဗူးတွေအကျီ င်္ထဲထည့်၊နားကြပ်မချွတ်ပဲ အသင့်ဖြစ်နေတဲ့ဆရာဝန်
ဆေးဗူးတွေအကျီ င်္ထဲထည့်၊အိမ်နေရင်းတောင်နားကြပ်မချွတ်ပဲ ဆေးကုသရန်အသင့်ဖြစ်နေတဲ့ဆရာဝန်
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 1/24/20150အကြံပြုခြင်း
ကျောင်းအုပ်ကြီးက ပြေးလိုက်ပြီး ကျောင်းဝင်းထဲမဝင်ဖို့တား
ထားဝယ်သပိတ်စစ်ကြောင်းက ကျောင်းသားတွေ ထားဝယ်နည်းပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းထဲ သပိတ်မှောက်ဆန္ဒပြတော့ ကျောင်းအုပ်ကြီးက အနောက်ကနေ ပြေးလိုက်ပြီး ကျောင်းဝင်းထဲမဝင်ဖို့တားတယ်…
ဒါပေမဲ့ ကျောင်းသားတွေဟာ ကျောင်းအုပ်ကြီးကို လုံးဝမမှု!
တားဆီးတာကို လုံးဝမတွန့်သွားဘဲ ရှေ့ကို ဆက်ပြီး သွားကြတယ်!
ကျောင်းအုပ်ကြီးရဲ့ တားဆီးမှုကို ဘာမှမတုန့်ပြန်ဘဲ ရအောင်ဖောက်ထွက်သွားတာ ကျောင်းသားတွေရဲ့ သတ္တိကို အရမ်းလေးစားလွန်းလို့ အလေးပြုပါတယ်!!!
video- Myo Myint
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 1/23/20150အကြံပြုခြင်း
ဦးဝီရသူ ပြောဆိုမှုကို ပြန်ကြားရေး အနေနဲ့ ကြားဝင် မဆောင်ရွက် နိုင်
ဥပဒေ ကြောင်း အရ အရေး ယူနိုင်ဖို့ ဆိုရင် အကျူးလွန် ခံရတဲ့ ကာယကံရှင် လူပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်စေ အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်စေက စတင်ပြီး ဆောင်ရွက် ရမှာမျိုး ဖြစ်တယ်လို့ ဦးရဲထွဋ်က ဆိုပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ သံတမန် တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ မစ္စ ယန်ဟီလီ ကို စင်ပေါ်မှာ ရုန့်ရင်း ကြမ်းတမ်းတဲ့ စကားလုံး တွေ သုံးစွဲပြီး လူအများကို ဟောပြော ခဲ့တဲ့ အရှင် ဝီရသူ နဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီး ဌာန အနေနဲ့ တိုက်ရိုက် ပါဝင် ဆောင်ရွက် လို့ မရကြောင်း နဲ့ သာသနာရေး ဝန်ကြီး ဌာနကို တော့ အကြောင်းကြား ထားတယ် ဆိုပြီး ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ် က ပြောပါတယ်။
ဦးဝီရသူ ရဲ့ ဟောပြောမှု အပေါ် ကုလ သမဂ္ဂ အပါအဝင် နိုင်ငံတကာ က ပြစ်တင် ဝေဖန်မှု တွေ ပြုလုပ် လာပြီး အရေးယူ ပေးဖို့ မြန်မာ အစိုးရ ကို တောင်းဆိုမှု တွေ ရှိလာ ပေမယ့် ဥပဒေ ကြောင်း အရ အရေး ယူနိုင်ဖို့ ဆိုရင် အကျူးလွန် ခံရတဲ့ ကာယကံရှင် လူပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်စေ အဖွဲ့အစည်း က ဖြစ်စေ စတင်ပြီး တရားစွဲဆို တာမျိုး လုပ်ဖို့ လိုအပ်တယ် လို့လည်း ဦးရဲထွဋ် က ဆိုပါတယ်။
မြန်မာ အစိုးရ အနေနဲ့ ဝေဖန်မှု တွေ ကို လက်ခံ ပေမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး စော်ကားမှု နဲ့ ဘာသာရေး လူမျိုးရေး စော်ကား တိုက်ခိုက်မှု မျိုး ကိုတော့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ အရကို လက်မခံ ပါကြောင်း ဦးရဲထွဋ် က ပြောပါတယ်။
သာသနာ့ ဝန်ထမ်း ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အနေနဲ့ ဝေဖန်စရာ တွေ ရှိရင်တောင် မှ ပိုပြီး ယဉ်ကျေး သိမ်မွေ့တဲ့ စကားလုံး တွေ နဲ့ ပြောသင့်တယ် လို့ သူ့ အနေနဲ့ ထင်မြင်ကြောင်း ဦးရဲထွဋ် က မှတ်ချက် ချခဲ့ပါတယ်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 1/23/2015 1 အကြံပြုခြင်း
တောင်သာသမိုင်းရဲ့ တစ်ရက်တာ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ (ဇန...
ကျောင်းအုပ်ကြီးက ပြေးလိုက်ပြီး ကျောင်းဝင်းထဲမဝင်ဖိ...